Musichall – « Application » vita malagasy azo hihaino hira, angano sy tantara amin’ny finday
Publié mars 6, 2021 par Book News
Mihamivoatra hatrany ny tontolon’ny kolontsaina malagasy. Misy ireo mpiray tanindrazana no miezaka hatrany manatsara izany ny manasongadina ny zava-kanto Malagasy. Anisan’ny hevitra tsara ary mendrika hotohanana ity fitaovana iray ity : Musichall, « application » iray toa an-dry Deezer, Spotify, na koa iTunes, izay fihainoana mozika. Ny mahahafakely azy ity : mozika malagasy sy karazana haikanto malagasy maro hafa no hita ao, vita malagasy izy, ary teny malagasy ranoray aloha hatreto.
Musichall : tsy mena-mitaha amin’ny « applications » vahiny
Maro amintsika malagasy no efa mampiasa ny « applications » fihainoana hira toy ny Deezer, Spotify, iTunes… Tsy mena-mitaha amin’ireo voatanisa teo aloha ireo ity « application » vita malagasy vaovao ity, izay mitondra ny anarana hoe « Musichall », noforonin’ny orinasa Musichall SARL.
Toy ireto hafa ireto dia ahafahana mihaino hira amin’ny finday ity fitaovana ity. Ahafahana ihany koa mihaino tantara, angano, tononkalo sy kabary.
Ny mampiavaka itony fitaovana itony moa dia ny fahafahana mihaino hira maro be, tsy mila ny atao hoe « carte SD » intsony fa efa anatin’ilay « application » avokoa ny hira rehetra, saingy raha te hanjifa izany ampahafaham-po tokoa dia mila mampiasa aterineto.
Toy ireo fitaovana any ivelany dia misy tolotra maimaimpoana sy andoavam-bola ny Musichall. Raha jifaina maimaimpoana izy dia vitsy ny hira azo henoina. Raha mividy ny tolotra kosa dia mahazo mihaino ny hira sy raki-kira rehetra ary mahazo tombony ihany koa ny mpanakanto ankafizin’ny mpihaino satria 5 Ariary isaky ny fihainoana no azony, raha toa ka 2 Ariary kosa raha mpanjifa maimaimpoana no mihaino azy.
55 000 Ariary isaky ny telo volana ny saran’ny tolotra, ary 174 000 Ariary kosa raha hividy tolotra maharitra herintaona.
Hatreto dia mbola mila aterineto ny fihainoana ireo sangan’asa ao amin’ny Musichall. Nilaza anefa i Rado Rakotomahefa, tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa, fa ho atao tahaka ny « applications » rehetra izy ity ka hisy ny fihainoana tsy mila aterineto na ny antsoina hoe « écoute offline ».
Ankoatra izay, finday ahitana ny rafitra Androïd 6 no mihaotra no afaka ampiasana ity fitaovana ity. Mbola ho avy kosa ny « version iOS », araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra hatrany.
Eo amin’ny resaka fandoavam-bola kosa, afaka atao amin’ny alalan’ireo rafitra fandoavam-bola amin’ny finday na « mobile-money », aloha an-toerana eny amin’ny tobin’ny orinasa eny Ampasanimalo na aloha amin’ny alalan’ny banky ny vola. Raha avy any ivelany dia ilaina ny karatra Visa na MasterCard.
Marihina moa fa teny malagasy tanteraka ny Musichall amin’izao, fa hisy ireo teny vahiny hafa atsy ho atsy.
Rado Rakotomahefa, tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa, nandritra ny famoriana mpanao gazety teny Ampasanimalo. cc: Princia R.
Tombontsoa ho an’ny mpampiasa
Misy tombony ho an’ny mpampiasa azy ny Musichall. Voalohany indrindra dia afaka manangona « playlist » tsy voafetra ny mpampiasa rehefa ao, araka izay tiany.
Faharoa dia afaka ihany koa izy misafidy izay tiany hohenoina, ary hahita ireo karazana gadona tiany satria hisy ny « suggestions » mifanaraka amin’ireo sangan’asa tiany rehefa mihaino hira izy.
Afaka hanjifa ireo sangan’asa vaovan’ny mpanakanto ankafiziny ihany koa ny mpampiasa tsirairay.
Tombontsoa ho an’ny mpanakanto
Mitondra tombontsoa maro ho an’ny mpanakanto malagasy ity fitaovana ity. Voalohany indrindra dia manakana ny « piratage » ity teknolojia ity satria tsy azo alaina ny hira.
Faharoa dia mahazo vola ireo mpanakanto isaky ny misy mihaino ny sangan’asany, araka ny voalaza etsy ambony.
Fahatelo dia manosika azy ireo hioatra kokoa ary hiditra amin’ny sehatra iraisam-pirenena izany.
Anisan’ny olana goavana sedrain’ny mpanakanto malagasy sy ireo rehetra misehatra eo anivon’ny kolontsaina ny tsy fananam-bola, indrindra entina hampahafantarana ny sangan’asany. Noho izany indrindra no ilàna ny teknolojia toy ny Musichall, mba ahafahan’ny mpanakanto malagasy manaparitaka ny sangan’asany amin’ny sarany mirary. 40 000 Ariary ny mampiditra sangan’asa ao ankehitriny, ary enim-bolana aorian’izay no mandray ny volany voalohany ny mpanakanto tsirairay.
Sakana ihany koa ny « piratage », izay anisan’ny tena manimba ny tsenan’ny mpanakanto, indrindra eo amin’ny sehatry ny mozika sy ny horonantsary.
Tanjon’ny Musichall SARL
Manolona ireo sakana sy olana ireo dia nanolotra ity vahaolana ara-teknolojika ity ny Musichall SARL. Tanjon’izy ireo moa ny fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy, ny fanandratana ny talenta malagasy, ny fanomezana hasina ny mpanakanto malagasy ary ny fanomezana toerana ny vita malagasy.
Tamin’ny 2019 no niforona ity orinasa ity. Ny BNI sy ny Bemozika moa no miara-miasa amin’izy ireo amin’ity tetikasa ity.